४० वर्ष थुनिएर ६० वर्षमा निस्किँदा बुढी आमालाई भेट्न आतुर छन् दुर्गा, भन्छन् जवानी वैँश जेलमा बित्यो अब धुमधामले विबाह गर्ने हो – Classic Khabar
March 21, 2021 193
चालीस वर्ष भारतको कोलकातास्थित दमदम जेलमा बिना सुनुवाइ बिताएका इलामको माई नगरपालिका–१० का ६१ वर्षीय दुर्गाप्रसाद तिम्सिना काँकडभिट्टा आइपुग्नुभएको छ । कोलकाता उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ठोटविल बी राधाकृष्णन् र अनिरुद्र रोयको आदेशमा काकाका छोरा प्रकाशचन्द्र तिम्सिनाको रोहवरमा शनिबार उहाँलाई दमदम का रा गारले रिहा गरिदिएको थियो ।
कोलकाताबाट भाइ प्रकाशचन्द्र तिम्सिना, विश्व सेवा विस्तार नामक उद्धार संस्थाका प्रतिनिधि इन्द्र बस्नेत र पत्रकारहरु पर्वत पोर्तेल र चिरञ्जीवी घिमिरेले उहाँलाई लिएर आउनुभएको हो । लामो अवधि जेलमा शारीरिक र मानसिक या’त’ना पाएका कारण उहाँको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक देखिएको छ । उहाँ कम बोल्नुहुन्छ र एकोहोरिनुहुन्छ ।
भाइ प्रकाशचन्द्रका अनुसार दुर्गाप्रसादको बोलाउने नाम दीपक हो । १९ वर्षको उमेरमा तोरी बेच्न पश्चिम इलामको मङ्गलबारे बजार जाने निहुँले दुर्गाप्रसाद रोजगारीको खोजीमा भारतको दार्जिलिङ पुग्नुभएको थियो । दार्जिलिङमा उसबेला गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका लागि हिंसात्मक आन्दोलन चलिरहेको अवस्था थियो ।
खोज्न जाने परिस्थिति थिएन र उताबाट पनि दुर्गाप्रसादको कुनै खबर आउन सकेन । “कतैबाट खबर नआएपछि दाजु आन्दोलनमै मारिनुभयो होला भन्ने घरपरिवारमा लागेको थियो”, भाइ प्रकाशचन्द्रले भन्नुभयो, “चालीस वर्षपछि बङ्गाल रेडियो क्लबका माध्यमले उहाँ जेलमा जीवितै रहनुभएको खबर आयो ।”
दमदम का रागा रमा सँगै बसेका पश्चिम बङ्गालकै मेदनीपुर जिल्लाका दाधेश्याम दास नाम कैदीले दुर्गाप्रसादको अवस्था र पहिचानबारे पहिलोपल्ट जेल बाहिर खबर ल्याउनुभएको थियो । दासले बङ्गाल रेडियो क्लबमा नेपालका दुर्गाप्रसाद नामका कैदी चार दशकदेखि बिना सुनुवाइ बसिरहेको खबर पु¥याउनु भएपछि मिडियामा समाचार छापिन थालेका हुन् । उहाँलाई अहिले जेल बाहिर ल्याउन रेडियो क्लबको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको प्रकाशचन्द्रले बताउनुभयो ।
हराएका मानिसको खोजीमा सघाउने संस्था विश्व सेवा विस्तारका प्रतिनिधि इन्द्र बस्नेतले बङ्गाल रेडियो क्लबसँगको सम्पर्कपछि इलाममा दुर्गाप्रसादका भाइ प्रकाशचन्द्रसँग सम्पर्क गर्नुभएको थियो । घरमा दुर्गाप्रसादका आमा धनमाया वृद्धास्थामा हुनुहुन्छ । उहाँ सात वर्षकै हुँदा बुवा चम्पाखरको निधन भएको थियो । दुर्घटनामा परी आमा धनमायाको एउटा हा’त का’टे’र फा’ल्नु’परेको थियो ।
रातभरि अनिँदो अवस्थामा गाडी चढेर काँकडभिट्टा आइपुग्नुभएका दुर्गाप्रसादले पत्रकारसँग हाँसो साट्ने र थोरै बोल्न मात्र सक्नुभयो । उहाँले सेतो कमिज र खरानी कलरको ट्राउजर लगाउनुभएको थियो । उहाँका भाइ प्रकाशचन्द्रले इलामबाट थप आफन्तहरु काँकडभिट्टा आइपुगेपछि पहिलो मिलन गराएर आजै घर पु-याइने बताउनुभयो ।
Prevआमा आमा बिहे गर्ने शरिनको आमा बारे गरिएको कुरा के हो ? पुण्यलाई मु,द्दा हाल्छु भनेपछि खुलाए वास्तविकता (भिडियो सहित)
Nextभागीरथी प्रकरणमा दिनेशले फेरी बयान, मैले आफ्नै दिदीलाई कहाँ त्यस्तो गर्न सक्छु र ?
जन्मदिनमा पूर्वयुवराज पारसले भावुक हुँदै भने, ‘हाम्रा पुर्खाका कारण नेपालीले गर्व गरेका छन्’
उनको अगाडि मृत्यु उभिएको थियो तर यी युवती मुस्कुराउँदै सेल्फी लिदै थिइन्, के भयो हेर्नुहोस् भाइरल भिडियोमा